​भाषा नजानेको भए मेरो के हाल हुन्थ्यो होला !
Wed, Apr 25, 2018 | 08:24:59 NST
10:48 AM (1 year ago)
Total Views: 7.5 K
लोकबहादुर श्रेष्ठ, तोश्रामखोला ४, सिन्धुली
विदेश जानुभन्दा अघि नै मैले विदेश जाँदा अभिमुखीकरण लिएर जानुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ । अभिमुखीकरण तालिममा सम्बन्धित देशको हावा पानी रीतिरिवाज, परम्परा, भाषा र धर्मको बारेमा जानकारी दिइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले तालिम लिएँ । केहीले त अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पत्र म्यानपावरले दिइहाल्छ किन समय बर्बाद पार्नु पनि भने तर मैले उनीहरुको कुरालाई वास्तै नगरी तालिम लिएँ ।
तालिम लिएर म मलेसियाको आल्मुनियम कम्पनीमा पुगें । त्यहाँ पुगेर पनि सुरुमा त खासै भाषा वुझिन । मैले त्यहाको भाषाका लागि मलेसियामा २० देखि २२ वर्षसम्म बसेका पुराना बसिसँग साथी वनि भाषा सिक्न थालें । दुई महिनामा मलाई धेरै कुरा बोल्न आउन थाल्यो । ६ महिनापछि मलेसियामै खुलेको सदस्यता लिएँ । ३ सय ५० रुपैयाँ तिरेर सदस्य बनेको थिएँ । यो क्लब २० देखि २२ वर्षसम्म मलेसियामा बिताएका पुराना साथीहरुले स्थापना गरेको संस्था रहेछ । यो संस्थाले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग गथ्र्यो ।
मलेसियाको बसाई दुई वर्ष पुगेको थियो । एक दिन म काम गरिरहेका बेला माथिबाट पलामको टुक्का झरेर मेरो दाहिने हातको हत्केला काटियो । उपचार गर्ने क्रममा मेरो हात अलि ठिक भएपछि कम्पनीको हाकिमले अब तिमी घर जाउ तिमी यहाँ काम गर्न सक्दैनौं भन्यो । घरको आर्थिक अवस्थाले विदेशिएको म त्यति बेला फर्किन सक्ने अवस्थामा थिइन । त्यसैले म्यानपावरमा फोन गरें । कम्पनीले मलाई फर्काइदिने भयो भनेर पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गरें तर म्यानपावरले कुनै जवाफ नदिई फोन काटिदियो ।
कुनै उपाय नभएपछि मैले आफ्नो समस्या क्लबमा राखें । भोलिपल्ट क्लबले कम्पनीसँग कुरा गरिदियो । त्यसपछि मलाई कम्पनीले बोलाएर के गर्न सक्छौं ? गर्न सक्ने काम दिन्छौं भन्यो । मैले मलाई अलि सजिलो काम दिनु म गर्न सक्छु भनेपछि मलाई नक्साहरुको फोटो कपी गर्ने काम दियो । मैले फोटोकपी गरेर र ठाउँ ठाउँ पुर्याउँथें । त्यसै गर्दै मैले सजिलोसँग काम गरेर चार वर्ष बसेर फर्किएँ । त्यसको एउटै कारण थियो भाषा ।
यहाँ अभिमुखीकरणमा थोरै जानकारी पाएको थिएँ । त्यहाँ पुगेपछि संलग्न भएको क्लबका साथीहरुका कारण भाषा जान्ने भएँ । त्यसैले विदेश जाने तयारी गरिरहेका साथीले भाषालाई सामान्य नठान्नुहोला । विदेश जानेहरुका लागि भाषा एकदमै ठूलो हतियार हो ।
(सूचना तथा परामर्श केन्द्र, सिन्धुलीका परामर्शकर्ता उत्तर गुर्मछानले गर्नुभएको कुराकानीका आधारमा)
वैशाख ११ – चार महिना अघिमात्रै मलेसिया आएका एक नेपाली समस्या परेका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका १ का प्रदिप बिकलाई बिरामी पर्दा कम्पनीले उपचार नगर्ने र घर फर्किन खोज्दा पनि नदिने गरिपछि उहाँ समस्यामा पर्नुभएको हो ।
विदेशमा रहेकालाई इमेलमै चारित्रिक प्रमाणपत्र
काठमाडौं, वैशाख ११ – विदेशमा भएकाले चारित्रिक प्रमाणपत्र इमेल मार्फत पनि लिन सक्ने भएका छन् ।
कतारमा अलपत्र परेका ४२९ नेपालीलाई दूतावासले खाद्यान्न व्यवस्था गर्ने
काठमाडौं, वैशाख ११ – कतारको हमाद विन खालिद विन हमाद डब्लुएलएल (एचकेएच) कम्पनीमा समस्यामा परेका ४२९ जना नेपालीलाई कतारस्थित नेपाली दूतावासले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ ।
​आबुधाबीमा हुने २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीमा नेपाल सहभागी हुने
वैशाख ११ – युएईको आबुधाबीमा हुने पुस्तक प्रदर्शनीमा नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ ।